Insurgency: Sandstorm inofanira kuuya kuLinux gore rino ... | Linux Vakapindwa muropa
Insurgency: Sandstorm inofanirwa kusvika paLinux gore rino ...
Kana iwe uri fan wevatanga-vanhu kupfura, iwo maFPS emitambo yemavhidhiyo yaunofarira zvakanyanya, iwe uchave uchida nyaya iyi nezve inogona kuitiswa Insurgency: Sandpaper iyo yakatoburitswa yeWindows uye inofanirwa kusvika kuLinux gore rino. Pasina mubvunzo izvo zvinogona kuoneka kubva mumutambo wevhidhiyo zvinoshamisa uye maLinux vatambi vanotevera mhando iyi yemutambo vanozoifarira. Saka isu tichava takatarisa kune mafambiro eNew World Interactive ...
Iyo Linux chikuva inoita kunge yakatsunga kudzosera matafura uye kudzoreredza indasitiri yaive neutsinye kuikanganwa. Ndichiri kurangarira makore ekutanga neLinux uko mashoma aive maAAA mitambo iyo iwe yaunogona kuwana yeLinux, chete vamwe vakaita seHalf Hupenyu kana Unreal Tournament ndivo vakasara vakasimbisa mutemo. Asi ikozvino isu tave kutopfuura mazita e5000 uye mazhinji akawanda achange achisvika muna 2019. Zvinotaridza kusashamisa mumakore mashanu apfuura izvo panorama zvachinja mune izvi uye nekumhanyisa kwenyaya.
Zvakanaka, Kumukira: Dutu remhepo, ngativimbei kuti rinobatana nerondedzero yemazita atinayo. Zvinoenderana nekudzidza New World Inopindirana Vati ivo vari kutsvaga mapuratifomu matsva ekutanga zita ravo mune ramangwana, uye Linux inogona kuvapinda. Uye zvakare, yatove muna Zvita wegore rapfuura vakati kuvhurwa kweLinux, ndiko kuti, iro vhezheni yakamirirwa kwenguva refu, kwaizouya mushure mekutanga kuvhurwa kweWindows uye izvo zvinogona kuitika iyi 2019.
Uye zvakare, ivo vakasimbisa zviri pamutemo kuti ivo vari kushanda nesimba kumukira uye vazivise munguva pfupi yekupedzisira zuva reInsurgency: Sandstorm yeLinux uye usanonoka kupfuura gore rino. Zvinotaridza sekunge vatove nekuita nhanho huru muchikamu chekusimudzira uye kuti tichazoziva zvimwe zvakawanda munguva pfupi, saka idzva nhau huru dzevatambi vepenguin chikuva. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda, unogona kutarisa Humble Store y chiutsi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Insurgency: Sandstorm inofanirwa kusvika paLinux gore rino ...
TuxClocker, iyo GUI yekuwedzeredza chishandiso cheLinux
Mbiru dzekusingaperi II ine nhau muBeta yayo